Khadadka Waxsoosaarka Bacriminta Xarunta - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Waxaan khibrad buuxda u leenahay khadka soo saarista bacriminta xarunta. Kaliya diiradda kama saarno xiriirinta geeddi-socod kasta ee habka wax soo saarka, laakiin sidoo kale waxaan marwalba qabannaa faahfaahinta geeddi-socodka ee xariiq kasta oo wax soo saar ah oo si habsami leh ayaan ku gaari karnaa isku-xirnaanta. Waxaan ku siinaa xalalka wax soo saarka habka loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah ee macaamiisha.
Nidaamka wax soo saarka oo dhameystiran waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee iskaashiga aad la leedahay Warshadaha culus ee 'Yuzheng Heavy Industries'. Waxaan bixinaa naqshadeynta habka iyo soo saarista xirmo dhameystiran oo xariiqyo wax soo saar ah.
Bacriminta isku-dhafan waa bacrimin isku dhafan oo ka kooban nitrogen, fosfooraska iyo potassium, oo lagu qaso qayb ahaan qayb ka mid ah bacriminta oo lagu soo saaro falcelinta kiimikada. Waxyaabaha nafaqadu ka kooban tahay waa isku mid cabbirka walxaha waa isku mid. Khadadka soo saarista bacriminta isku dhafan waxay leedahay la qabsi ballaaran oo ku saabsan soosaarida alaabada ceeriin ee bacriminta isku dhafan ee kala duwan.
5, dheecaanka: dhoobada magaalooyinka, dhoobada webiga, dhoobada shaandhada, iwm.
Khadadka soo saarista bacriminta isku dhafan waxaa lagu qalabeeyaa walax firfircoon, mashiinka laba dhidibka ah, granulator cusub oo bacrimiya xarunta, silsilad silsilad taagan, qaboojiye qalajinta durbaanka, mashiinka shaandhada durbaanka, mashiinka dahaadhka, boodh aruuriyaha, baakad otomaatik mashiinka iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah.
Maaddaama aan nahay soo saare xirfadle ah oo ah qalabka khadka wax soo saarka bacriminta, waxaan macaamiisha siineynaa khadad wax soo saar leh 10,000 tan sanadkii illaa 200,000 tan sanadkii.
1. Heerka kala-soociddu waa illaa 70% oo leh mashiinka durduridda durbaanka oo horumarsan.
2. Qaybaha muhiimka ah waxay korsadaan walxaha u adkaysta dharka iyo daxalka u adkaysta, qalabkuna wuxuu leeyahay nolol adeeg dheer.
3. Mashiinka durbaanka wareega ah waxaa lagu dhajiyay silikoon ama taarikada birta ah ee birta ah, maaddaduna ma sahlana in lagu dhejiyo darbiga gudaha mashiinka.
4. Hawlgal xasilloon, dayactir habboon, waxtarka sarreeya iyo isticmaalka tamarta oo hooseeya.
5. Adeegso suunka wax lagu raro si aad ugu xirto dhamaan khadka wax soo saarka si aad uhesho wax soo saar isdaba joog ah.
6. U adeegso laba qaybood oo qollada boodhka ah si aad ugu daaweyso gaaska dabada ee ilaalinta deegaanka.
7. Qeybinta shaqada ee labo shaandho ayaa xaqiijineysa in cabirka walxaha uu yahay mid isku mid ah isla markaana tayada ay u qalanto.
8. Isku-dhafka labiska, qallajinta, qaboojinta, dahaadhka iyo habab kale ayaa ka dhigaya wax soo saarka dhammaaday mid tayo sare leh.
Geedi socodka socodka ee khadka soo saarista bacriminta xarunta: maaddooyinka ceyriinka ah, waxyaabaha ceyriinka ah ee isku qasan → granulation → qalajinta → qaboojinta product baaritaanka alaabta la dhammeeyay fra Kala jajabka walxaha caagga ah → dahaadhka packaging Baakadaha wax soo saarka ee dhammeeyay. Xusuusin: Khadkan wax soo saar waxaa loogu talagay oo kaliya.
Marka loo eego baahida suuqa iyo natiijooyinka go'aaminta ciidda maxalliga ah, urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium thiophosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium culus, potassium chloride (potassium sulfate) iyo alaabada kale ee ceyriin waxaa loo qaybiyaa qayb cayiman. Waxyaabaha lagu daro, walxaha raadraaca, iwm ayaa loo isticmaalaa inay yihiin maaddooyin ku jira saamiga miisaanka suunka. Marka loo eego saamiga qaaciddada, dhammaan walxaha maaddooyinka ceyriinka ah si siman ayaa looga soo daadiyaa suumanka illaa kuwa wax lagu qaso, habka loo yaqaan 'premixes'. Waxay hubisaa saxsanaanta sameynta waxayna ku guuleysataa maaddooyin joogto ah oo hufan.
1. Isku qas:
Qalabka ceyriin ee la diyaariyey ayaa si buuxda isugu dhafan oo si isku mid ah loo walaaqay, iyagoo aasaas u dhigaya wax-ku-oolnimada iyo bacriminta tayo sare leh ee tayo sare leh. Mashiinka jiifka ah ama mashiinka diskiga ah ayaa loo isticmaali karaa isku darka isku midka ah iyo kareyso.
Maaddada ka dib isku darka iyo jajabinta si siman ayaa looga qaadaa xamuulka suunka ilaa granulator-ka cusub ee bacriminta. Iyada oo wareegga isdaba jooga ah ee durbaanka, maaddadu waxay sameysaa dhaqdhaqaaq is rog rogaya oo lagu maro waddo cayiman. Cadaadiska dhireedka ee la soo saaray, maaddada waxaa dib loogu mideynayaa qaybo yaryar oo waxaa lagu dhejiyaa budada ku hareereysan si tartiib tartiib ah loogu sameeyo qaab goobeed u qalma. Dhagxaanta
Maaddada granulation waxay u baahan tahay in la qalajiyo ka hor inta aysan la kulmin shuruudaha ku jira qoyaanka walxaha. Markay qallajiyaha wareejiso, saxanka wiishka gudaha ayaa si isdaba joog ah u qaadaya una tuuraya walxaha wax ka sameysmaya, si maadadu ay xiriir buuxa ula leedahay hawada kulul si ay uga qaaddo qoyaanka ka soo baxa, si loo gaaro hadafka qalajinta oo isku mid ah. Waxay qaadataa nidaam nadiifin hawadeed oo madax bannaan si ay si dhexe ugu soo saaraan gaasaska qiiqa una keydsadaan tamarta una yareeyaan isticmaalka.
4. Qaboojinta Granule:
Ka dib markii ay qallalan yihiin walxaha maaddada, waxay u baahan yihiin in loo diro qaboojiyaha si loo qaboojiyo. Meel-qaboojiyaha waxaa ku xiran mashiinka suunka qallajiya. Qaboojintu waxay ka saari kartaa boodhka, waxay hagaajin kartaa waxtarka qaboojinta iyo ka faa'iideysiga tamarta kuleylka, waxayna sii saartaa qoyaanka qaybaha.
Ka dib marka walxaha wax la qaboojiyo, dhammaan walxaha wanaagsan iyo kuwa waaweynba waxaa lagu baaraa shaandheeye. Badeecadaha aan u qalmin ee laga soocayo qalabka wax lagu xambaaro suunka ilaa isku dhafka ah ayaa la isku walaaqay oo mar labaad lagu shiidey alaabta ceyriinka ah. Shayga la dhammeeyay waxaa loo qaadi doonaa mashiinka dahaadhka bacriminta xarunta.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu dalbado filim isku mid ah oo ilaaliya dusha sare ee walxaha wax loo dhammeeyo si wax ku ool ah loo hagaajiyo nolosha shelf ee walxaha oo ka dhigo jajabyada jilicsan. Dahaadhka ka dib, waa isku xidhka ugu dambeeya ee habka wax soo saarka oo dhan - baakidh.
Nidaamkani wuxuu qaataa mashiin tiro wax lagu rido oo baakidh ah. Mashiinka wuxuu ka kooban yahay mishiin si toos ah u miisaamaya, qalab wax lagu raro, mashiinka wax lagu xiro, iwm. Waxaad sidoo kale ku habeyn kartaa hiwaayad iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Waxay xaqiijin kartaa baakadaha tirada badan ee qalabka sida bacriminta dabiiciga ah iyo bacriminta isku dhafan.